एक स्मार्टफोन जुन दुई दिन वा २K रिजोलुसनको साथ रहन्छ? | Androidsis
यहाँ शायद हामी एउटा विवादमा फस्न सक्दछौं, जब कि स्मार्टफोन्सको टेक्नोलोजी छला and्गमा पार हुन्छ, ब्याट्री धेरै पछाडि पछाडि छन्। नयाँ समाचारहरू हेर्न गाह्रो छ जहाँ यो दावी गरिएको छ कि स्मार्टफोनको ब्याट्री सुधार गरिएको छ ताकि यसलाई पूर्ण प्रयोग दिँदै धेरै दिनसम्म रहन्छ।
अब दुई महत्त्वपूर्ण स्मार्टफोनहरू जस्तै LG G3 र नोट4सँग तिनीहरूको अविश्वसनीय स्क्रीनहरूको साथ विकासको स्क्रीन आउँछ र त्यो रिजोलुसन जुन सबैको ओठमा छ Quad HD वा 2K जस्ता। प्रस्तुतीकरणमा उही एलजी LG G3 यो बहाना थियो कि ब्याट्रीमा प्रभाव यो नयाँ स्क्रिन हुन सक्छ उच्च पीपीआईको साथ, यो फोनको राम्रो प्रदर्शनको साथ समाधान गरियो जब यो ब्याट्री प्रबन्ध कसरी गर्ने भनेर जान्नको लागि आउँदछ, तर जब यो वास्तविकतामा आउँछ, या त दुबै एलजी र सामसु ofको विशेष ब्याट्री मोडको साथ, हामी गर्ने घण्टा। अगाडि फोन प्रयोग कम हुनेछ।
र यो सोनी मात्र हो कि सामने आयो, तर यो उही प्रयोगकर्ताहरु छ। LG G3 को मामलामा पनि, यदि यो छ भने स्क्रिन बन्द हुँदा लगभग न्यून खपत, जब तपाईं प्रयोग गरिरहनु भएको छ तपाईं भन्न सक्नुहुन्छ।
सोनीको प्रमुख बजार अधिकारी क्यालम म्याकडौगलले यस्तो टिप्पणी गरे: “हुनसक्छ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा प्रदर्शनसँग सम्बन्धित भन्नु भनेको हामीले नगरेको हो। हामीले Xperia Z1080 को लागी 3p स्क्रिनको साथ जारी राख्न निर्णय गरेका छौं, यद्यपि हामीले बजारमा हाम्रा प्रतिस्पर्धाहरूको केही अंश देख्यौं जुन २ के स्क्रीनहरू ल्याउँदैछ। यसको पछाडि कारण तीन कारणका लागि रहेको छ। पहिलो, साना स्क्रिनहरू भएकोले हो मानव आँखा बुझ्नको लागि धेरै गाह्रो २K र पूर्ण HD को बीचको भिन्नता। दोस्रो यो हो कि प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रयोगकर्ता अनुभव न्यूनतम हुन्छ। र तेस्रो, यो ब्याट्री खपतका लागि हो।»
म्याकडगलले अन्तिम कारणको व्याख्या गर्न गयो:हामी विश्वास गर्दछौं कि प्रयोगकर्ता अनुभवको मुख्य भाग लामो समयसम्म चल्ने ब्याट्री हुनुपर्दछर यदि हामीलाई लाग्छ कि हामी तपाईलाई फुल एचडी र सोनी टेक्नोलोजीहरूको साथ एक ठूलो स्क्रीन ल्याउन सक्छौं, हामी सोच्दैनौं कि यो हाम्रो ग्राहकहरु लाई यसको अतिरिक्त ब्याट्री ड्रेनको साथ २ के स्क्रीन प्रदान गर्नु उचित हो।»
अब प्रश्न एक हुनेछ कि तपाईं तल जवाफ दिन सक्नुहुन्छ। तपाईं के मन पराउनुहुन्छ, एक स्मार्टफोन जुन मैले लगभग २ पुग्न एक दिन भन्दा बढि समय खर्च गरें, वा २K रिजोलुसनको साथ एक स्क्रिन?
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » सोनी » के २K रिजोलुसन भएको स्मार्टफोन यसको लायक छ? अत्यधिक ब्याट्री खपतको कारण सोनीले होईन
एक moivl मा २k 2k TV जस्तै छ, त्यो रिजोलुसनको सामग्री बिना तपाईंले मिति बनाउँदै हुनुहुन्छ।
D! 3G0 भन्यो
मलाई लाग्छ कि सोनीको भद्र मानिस यस्तो सानो स्क्रीनमा बिल्कुल सही छ कसैले २k एकबाट १p०p पर्दा छुट्याउँदैन, र यो जानेर लगभग ब्याट्रि लाइफ स्क्रिनमा रिजोलुसनको लागि बलिदान हुँदैन।
D! 3G0 लाई जवाफ दिनुहोस्
मसँग G3 छ र यद्यपि यो सत्य हो कि त्यहाँ धेरै भिन्नता छैन यो पनि सत्य छ कि ब्याट्री बढी वा कम z2 वा S5 को जस्तै रहन्छ।
यो व्यक्तिलाई भन्नु कि यो सस्तो पर्दा राख्नको लागि एक उचित औचित्य हो र यस्तो देखिन्छ कि यो एक सुधार हो।
एक पोपोको उत्तर दिँदै, जी ले २ के पनि रेकर्ड गर्दछ र राम्रोसँग, त्यहाँ बजारमा स्वीकार्य मूल्यमा २ के टेलिभिजनको अनन्तता छ, यो केवल टेलिभिजन किन्नु पर्ने कुरा मात्र हो।
लुइफरलाई जवाफ दिनुहोस्
Logitech K480 पहिलो किबोर्ड हो जुन तपाईंलाई एकै समयमा3उपकरणहरूमा जडान गर्न अनुमति दिन्छ